Zvemukati zvinyorwa zveiyo iPhone 7 zvinosimbisa akati wandei runyerekupe | IPhone nhau
Zvinyorwa zvemukati zveiyo iPhone 7 zvinosimbisa runyerekupe rwakasiyana
Zvinotaridza kuti mwero wakakwira wekudonha pane iyo iPhone 7 haisi kuzononoka. Vhiki rino chete ndeavo mamaboard emamaPhones anotevera, avo epamberi mapaneru uye processor yeA10 yakaburitswa, pamusoro pekumwe kuburitsa kwakazove kwenhema. Nhasi, OnLeaks atumira pane yechiFrench blog NoWhereElse akati wandei mafoto e zvinyorwa zvemukati izvo zvaizosimbisa kumwe kweguhwa pamusoro peiyo smartphone iyo Apple ichaunza munenge mwedzi.
Mifananidzo yacho inonzi inouya ichibva chirimwa chavari kukwira iPhone 7 uye inosanganisira mapeji akati wandei anotsanangura maitiro ayo ekugadzira. Semazuva ese, vasati vasvika kuMadokero, mifananidzo yakaonekwa paWeibo, inozivikanwa seChinese Twitter.
Zvinyorwa zvemukati zveiyo iPhone 7
Chinhu chakashata nezvekudonha kutsva uku, nguva dzose mumakotesheni nekuti Apple inofanirwa kubvumidza ruzivo kuti ruve pachena - kana zvikasadaro, OnLeaks ingati ivo havazvibvumidze sezvazvakatoita pane imwe nguva-, ndezvekuti havaratidze isu chero chinhu chitsva. Asi inosimbisa kudonhedza kwakawanda kwakapfuura, senge dhizaini kamera, kunamira kunze asi kubva mudzimba, kusavapo kwe 3.5mm headphone port uye a mutauri wechipiri pazasi.
Chinosuwisa ndechekuti magwaro aya anobva kuiyo iPhone 7 uye isu hatione chero chinhu kubva paMhando yepamusoro. Mazhinji runyerekupe uye kuvuza kunoti iyo hombe iPhone 7 ichasvika nayo. Smart Connector, asi takaverengawo yakawanda ruzivo iyo inovimbisa kuti Apple nyowani smart chinongedzo hachizove pane iyo iPhone 7 Plus futi.
Iyo iPhone 7 uye iPhone 7 Plus ichavhurwa munenge mwedzi, dzimwe runyerekupe dzinoti ichaburitswa pazuva September 7 uye vamwe kuti zvichaita saizvozvo muvhiki yaGunyana 9. Chero zvazvingaitika, isu tichaziva zvese zvishandiso uye zvese zvadzo mune angangoita mavhiki mana.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » IPhone Zviteshi » iPhone 7 » Zvinyorwa zvemukati zveiyo iPhone 7 zvinosimbisa runyerekupe rwakasiyana
Wave2Wake inotibvumidza isu kukiya uye kuvhura iyo iPhone neiyo proximity sensor
Apple inhanho imwe padhuze nekuvhura yayo yekutanga Apple Store muIndia